WoopShop Kambani Yemagariro Ekuremera Chirongwa
Yedu Yekambani Yenzvimbo Yekuremekedza Chirongwa
Kuti varambe vachinyemwerera ..
Pane zvakawanda kuva bhizinesi rakabudirira pane kungoita purofiti. Izvo zvakare nezve kuita chimiro chaicho uye kuva nechinobatsira pamagariro.
Semutungamiri muE-commerce bhizinesi, isu zvakare tiri kambani ino bata basa inoshanda kuona kuti online kutenga kunotyaira kusimudzira uye kusimudzira magariro kune nyika dzeAfrica.
Isu tasimbisa kuzvipira uku kuvashandi vedu, vatengi, uye vatinoshanda navo. Saka takaisa chikamu chemubatsiro pachirongwa ichi chekupa uye takapa mukana wekuti vatengi vedu vatore chikamu muchirongwa ichi kuburikidza nekupa kubva pane peji rekutarisa.
Iyi mari ichashandiswa muAfrica ku:
Tsigira dzidzo uye kupedza kusadzidza.
Batsira mukubviswa kwehurombo hwakanyanya uye nzara.
Tsigiro yehutano chikamu nekuderedza kufa kwevana & kurwisa zvirwere.
Inzwa wakasununguka kupa uye kutora chikamu mukuzadzisa izvi zvinangwa zvakanaka nekupa pakubhadhara.